यी हुन् आज सर्वाधिक कारोबार गर्ने १० कम्पनी - Aarthiknews
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले साताको चौथो दिन आज (बुधबार) दोहोरो अंकले बढेको छ । हिजो (मंगलबार) नेप्सेमा सामान्य अंकको गिरावट आएको थियो । आज नेप्से १५.८७ अंकले बढेर दुई हजार तीन सय ४२ दशमलब ७६ विन्दुमा पुगेको छ भने ६ अर्ब २१ करोड ९ लाखको कारोबार भएको छ । नेप्सेका अनुसार आज कारोबार भएका कूल १२ उपसमूहमध्ये ५ समूह बाहेक अन्य समूह बढेका छन् ।
बुधवार सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको भएको छ । हाल कायम प्रतिशेयर मूल्यलाई घटाएर रू. ५० मा झार्न लागेको कम्पनीको बुधवार रू. ६१ करोड ४० लाख ८९ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो । सर्वाधिक रकमको कारोबारसँगै कम्पनीको शेयरमूल्य पनि ७ दशमलव २९ प्रतिशतले बढेको छ । प्रतिकित्ता रू. १९६ ले बढेर नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको अन्तिम शेयरमूल्य रू. २ हजार ८८५ पुगेको छ । यस कम्पनीले नेपालको धितोपत्र कारोबारको इतिहासमा पहिलो पटक शेयर संख्या टुक्राउन लागेको हो । कम्पनीले आगामी माघ २८ गते हुने वार्षिक साधारण सभामा प्रतिशेयर अंकित मूल्य घटाउने प्रस्ताव लैजादैछ । ३१ प्रतिशत बोनस शेयर र २० प्रतिशत कर सहित नगद लाभांश गरी कुल ५१ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको कम्पनीले दोस्रो बजारमा सबै लगानीकर्ताको पहुँच पुग्ने गरी शेयर संख्या बढाउन लागेको बताएको छ ।
नेप्सेका अनुसार बुधबार बजारमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, प्रभु बैंक लिमिटेड, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड, शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, एनआइसी एशिया बैंक लिमिटेड, नेपाल टेलिकम, युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड, कुमारी बैंक लिमिटेड र माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड सर्वाधिक कारोबार भएका कम्पनीहरू हुन् ।